ခံစားကြည့်မှ သိမှာပါ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – မန္တလာမောင်မောင်တုတ်
“ စိတ်ညစ်တယ် ”
ဟု ညီးတွားလိုက်သော မိန်းမလှလေး၏ ပါးအို့လေး အစုံက ပန်းသီးမှည့်လေးအလားရဲတက်သွားသည်..။ အသစ်ဖောက်လုပ်ထားသော လမ်းမကြီးပေါ်၌ စပရင်တာ အဖြူလေးတစ်စီးက ငြိမ့်ခနဲထိုးရပ်သွားသည်..။ ကားထဲမှ သပ်ရပ်ထွားကြိုင်းသော လူငယ်တစ်ယောက်က စက္ကူအိတ် ခပ်ကြီးကြီးနှစ်လုံးနှင့် ငါးသုံးလုံး လက်ဆွဲ ပလပ်စတစ်အိတ်တစ်လုံး ဆွဲကိုင်ကာ
“ သိမ့် – တေလာ ”
အပ်ချုပ်ဆိုင်ထဲသို့ လှမ်းဝင်လာသည်..။ အပ်ချုပ်ဆိုင်အတွင်း အစီအရီ တန်းစီထားသော ခြေနင်းစက်ချုပ်ခုံလေးလုံးအနက် လက်ဝဲဖက်ဒေါင့်မှစိတ်ညစ်တယ် ဆိုသော ကောင်မလေးမှ အပ အားလုံးက ရွှေမင်းသားလေးကို အပြုံးမျက်နှာဖြင့်ကြည့်နေကြသည်..။
“ ဟယ်…..မောင်မောင်…..ကြည့်စမ်း…အင်္ကျီ ချုပ်အုံးမလို့လား…..”
စက်ခုံများအနောက်မှ စားပွဲတစ်ခုမှ..ခပ်တောင့်တောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပေကြိုးကို လည်ပင်းမှာပတ်ရစ်ရင်း ဆိုင်ရှေ့ ထွက်လာသည်..။
“ ကျနော့် အစ်မက ဂျပန်က အစလေးတွေ ပို့လိုက်လို့….မမရဲ့…အဟင်း….”
“ အင်္ကျီ ချုပ်အုံးမယ်ပေါ့….အခုတစ်လထဲ ရှစ်ထည် ရှိနေပြီ……..”
“ ဟုတ်တယ်…ဒီလကျမှ မမက ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး….စွတ်ပို့နေတာပဲ….ဂျပန်က လူကြုံကလဲဒီလ တော်တော်လာတာ….”
စပို့ရှပ် အဖြူအောက်မှ ထွားစို့ မောက်ကားနေသော ရင်ဘတ်ကြီးများ ၊ လက်တို စပို့ရှပ် လက်စီးအောက်မှသန်မာကျစ်လျစ်သော လက်မောင်းအိုးကြီးများက ကာယဗလ အားကစားသမားမှန်း သိသာစေသည်..။ပြောင်တင်းနေသော စကိုင်းဘလူး ဂျင်းဘောင်းဘီကြောင့် ခန့်ထည်ထွားကြိုင်းသော ပေါင်တန်ကြီးများကတစ်တစ်ရစ်ရစ် ဖြင့် ကြည့်ကောင်းလှသည်..။ ခြေထောက်တွင် စီးနင်းထားသော ဝေါ့ကင်းရှူးအနက်ရောင် ဒီဇိုင်းကလည်း မြန်မာပြည်တွင် နောက်ဆုံးလိပ်တက်စ် ဒီဇိုင်းမှန်း သိသာထင်ရှားသည်..။
ဖနောင့်တွင် လှပတောက်ပြောင်သော ခြောက်ထောင့်ကြယ် စတီးတံဆိပ် တစ်ခုပါသည်..။ဖိနပ်ဘေးပတ်ပတ်လည်၌ ပျော့အိနူးညံ့ဟန်ရှိသော ရေမြှုပ်များ ခံထားသည်..။ ဖိနပ်အောက်ရာဘာဆိုးလ်က နင်းလိုက်တိုင်း အိခနဲ အိခနဲ..။
“ ကဲ…….ဒီတစ်ခါ လက်ရှည်လား…၊ လက်တိုလား ပြော…..”
ပေကြိုးကို လည်ပင်းမှ ဖြုတ်ခါ စာရင်းစာအုပ်လေးကို လှမ်းဆွဲရင်း တောင့်တောင့်မမကအပြုံးလွင်လွင်လေးနှင့် မေးသည်..။
“ ဟို….ဟိုဒင်း…..မိန်း….မိန်းမဝတ် ချုပ်ချင်တယ်……”
“ ဟုတ်….ဒီ….ဒီက ညီမလေးအရွယ်….သူ့ကိုပဲ…တိုင်း……..”
“ အတာမှ မတိုင်းချင်တာ….ကို……”
“ အော်…..ဟယ်……..ဒါလေး လုပ်ပေးရတာများ….တာတာရယ်…..”
“ မမမိုး က ဘာမှ မသိပဲနဲ့….သွား မတိုင်းဘူး…..“
“ ကျမကို အတာလို့ မခေါ်ပါနဲ့……နာမည် ရှိတယ်…..”
အတာ အငေါ်တူးလေသမျှ မောင်မောင်က ကြည်နူးစွာ ပြုံးသည်..။ မမမိုးက အတာ့ကို တစ်လှည့်မောင်မောင့်ကို တစ်လှည့် ကြည့်ရင်း အားနာသော မျက်နှာဖြင့် ….ခေါင်းကို တွင်တွင် ကုတ်သည်..။
“ ဖြစ်ပါတယ်…မမမိုး….နောက်တော့ ချုပ်တာပေါ့… ဒီအစလေးတွေက ရှားပါးပစ္စည်းမို့ အလောသုံးဆယ် မချုပ်ချင်သေးဘူး..၊ မမမိုးပဲ သိမ်းထားပေးပါနော်…..၊ ကျနော် ကျောင်းနောက်ကျနေလို့ ခွင့်ပြုပါအုံး….”
“ ဘာ….ဒီလိုပါပဲ လဲ..ရှင့်စကားက ဘာစကားလဲ…..”
“ မမမိုး….အသာနေစမ်းပါ…..အသလွတ် လာရိနေတာ…ဘာသိလဲ…”
“ အာ…..ဒီ…..ဒီလို မဟုတ်ဘူး….အတာ…….”
မောင်မောင် သက်ပြင်းချသည်..။ ဂျင်းဘောင်းဘီ နောက်အိတ်အတွင်းသို့ လက်နှစ်ဖက် ကို ထည့်ကာအတာ့ကို စိုက်ကြည့်သည်..။ မောင်မောင့် မျက်လုံးများက စူးရှလွန်းသည်..။ အတာခေါင်းငုံ့ပစ်လိုက်သည်.။ နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်လုနီးပါး ကိုက်ထားရင်း ကပ်ကျေးကို ဆုတ်ကိုင်ထားသည်..။
“ တော်ပြီ….အတာ..နင် ငါ့ဆိုင်မှာ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး…. ဒီလောက် ဆက်ဆံရေး ကျဲနေမှတော့ဘာသုံးစားလို့ ရတော့မှာလဲ…”
“ အိုး…..ထွက်တယ်…သိပ်ထွက်တယ်…. ဟင်း….. ထမင်းတစ်လုပ်ကို လူတကာ ပရောပရီ လုပ်ပြီးမှ စားရမယ် ဆိုရင်လေ….တာတာတို့က ငတ်ပေ့စေ….မလုပ်ဖူး.”
စိတ်မြန်ကိုယ်မြန် ယိုးဒယား လက်ဆွဲခြင်းလေးထဲကို ထမင်းဗူးလေး ကောက်ထည့်ကာ နေရာမှထလိုက်လေသည်..။
“ ကျ…..ကျနော် တောင်းပန်ပါရစေဗျာ…ဒီ…ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့….၊ နောက်ကို မလာနဲ့ ဆိုလဲ…ကျနော်မလာတော့ပါဘူး…၊ မမမိုးကိုလည်း ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ်…ဗျာ…၊ မတာတာမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး..၊ ဟို…ကျနော် လေ…..ကျနော် မကောင်းတာပါ..သူ့ကို အမြဲ လိုက်စကားပြောမိလို့ ကျနော့်ကို မုန်းနေတာပါ…သူ့အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး.. မမမိုး…. သူပြောတာတွေ သိပ်မှန်နေတယ်….ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ…..”
မောင်မောင်….. ချာခနဲ လှည့်ထွက် သွားသည်..။
“ ဘယ်တုန်းက စတဲ့ပြဿနာလဲ…ရှင်းစမ်းပါအုံး…”
“ ကြာလှပြီ…မမမိုးရ…မီးထွန်းပွဲမှာ တွေ့ကတည်းက တကောက်ကောက် လိုက်နေတာ…အရမ်း စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာပဲ…”
“ ငါလဲ…ဘာမသိညာမသိနဲ့…နင့်ကို စွတ် ကောနေမိတာ….”
“ မမမိုးကို ပြောသားပဲ…ဘာမှ မသိပဲနဲ့ လို့……”
“အင်း…စိတ်က လက်တစ်ဆစ် ဆိုရင်…အင်း… ဟိုဒင်းကလဲ….လက်တစ်ဆစ်ပဲ တဲ့…”
“ မမမိုး နော်…မယုတ်မာနဲ့….”
ထမင်းဗူးလေးများ အသီးသီး ဖွင့်ကာ ထမင်းစားနေကြသော ခင်အေးဟန် တို့ သုံးယောက် ထမင်းသီးမတတ် ဝိုင်းရယ်ကြသည်..။ မမမိုး ဆိုသည်က တကယ်တော့ အပျိုကြီး မဟုတ်ချေ..။ မမမိုးယောက်ျားက လေယာဉ် ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။
အဲယား ဘတ်စ် မောင်းရင်း လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်နှင့် ငြိသွားခဲ့သည်..။ ထိုလေယာဉ်မယ်နှင့် အတူ သြစတေးလျ နိုင်ငံတွင် ရာသက်ပန် နိုင်ငံသားခံယူ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သွားသည်မှာ ကြာလေပြီ…။ မောင်မောင်ဆိုသည့် ကောင်ချောလေးနှင့်လည်းနိုင်ငံခြား လေယာဉ်ရုံးတစ်ခုတွင် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်..။
ထမင်းစားပြီး လက်ဘက်သုတ် ဝိုင်း ဆက်ပြန်သည်..။ ထုံးစံအတိုင်း ခင်အေးဟန်က ရပ်ကွက်သတင်းစတင်ကြေငြာလေတော့သည်..။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း သူ့အလုပ်…။
“ မမမိုး……မနေ့ညက မသိန်းကြည်တို့ သတင်း ကြားပြီး ပလား…..”
မမမိုးက လက်ဖက်သုတ်ကို တစ်ဇွန်း ခပ်စားရင်း ဇွန်းပြန်ချကာ မေးလိုက်သည်..။
“ မသိန်းကြည် နဲ့ ဟိုလေ….နေပါအုံး…..ဒီလူ…… အဲ….ကြိုင်ဆန်းဆိုတာလေ…. ဈေးခေါင်း…ဈေးခေါင်း…”
“ ဟဲ့…အဲဒါ….တူအရီး ဆိုလား မောင်နှမဝမ်းကွဲဆိုလား…”
ခင်အေးဟန် စကားမဆုံးခင် မမမိုးက မျက်လုံးအပြူးသား နဲ့ ဝင်ပြောသည်..။
“ ဟုတ်ပတော်…ဟုတ်ပ…အမျိုးတော်ကြတာ အမှန်ပဲ…”
“ အဲဒါ…ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဟဲ့…”
“ ဈေးသိမ်းပြီး မသိန်းကြည် ပြန်လာတော့ ည ခုနစ် နာရီထိုးပြီးပြီလေ….သိန်းကြည် ယောက်ျား စိုးလွင်ကအရက်သမားလေ…..”
ခင်အေးဟန် စကားကို မမမိုးက လက်ဖက်သုတ် တစ်ဇွန်းစားပြီး ဝင်ထောက်ပြန်သည်..။
“ စိုးလွင်က နိဗ္ဗာန်လမ်းက ကင်းတဲမှာ မူးပြီး အိပ်ပျော်နေတယ်…….စိုးလွင် မရောက်သေးခင် ကြိုင်ဆန်းကလာပြီး စားတာ….”
“ အေးလေ…..ဘာစားတာလဲ…..နင့်ဟာက ..မရှင်း…မရှင်း…..”
ခင်အေးဟန် ခေါင်းကုတ်သည်..။ အကူအညီ တောင်းသည့်ဟန် အတာတို့အား လှည့်ပတ်ကြည့်သည်..။အတာက ကြက်သီးထဟန်လုပ်ပြရင်း ပြုံးနေသည်..။ ဘာတစ်ခွန်းမှ ဝင်မပြောပါ…။
“ ကျမ ပြောတာ ရှင်းတယ်….မမမိုးက ဝေါဟာရ မကြွယ်တာ………”
“ အမလေး ဟဲ့…ဝေါဟာရ မကြွယ်တဲ့ ငါ့ကို ရှင်းရှင်းပြော……..”
အားလုံးက အုံးခနဲ ဝိုင်းရယ်ကြသည်…။ မမမိုးက ပြာပြာသလဲ..။
“ ကောင်မတွေ…တိုးတိုး ဟဲ့…အင်း…စားတာ…စားတယ်….အိမ်ပေါ်တက်စားတယ် ဆိုတာ…….”
“ မသိန်းကြည်ကို ကြိုင်ဆန်းက တက်လိုးတာ…..သိပလား…..”
လက်ဘက်ဇွန်း လှမ်းကိုင်လိုက်သော တင်တင်နွယ်က ဇွန်းကို ပြန်ချပြီး ပါးစပ်ကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ခါတသိမ့်သိမ့် ရယ်သည်..။ အတာက ခင်အေးဟန်ကို စုတ်ပဲ့…ဟု တစ်လုံးလှမ်းပြောသည်..။
“ သူတို့ဟာက ………ခိုးလဲစားသေး…ဇိမ်နဲ့ တော်ရေ…..”
“ ဘယ်လို ဇိမ်နဲ့ လဲ ဟဲ့….”
“ ကျွတ်…..မမမိုးကလဲ…မသိန်းကြည်က ကြိုင်ဆန်းဟာကြီးကို ပုလွေမှုတ်နေတုန်း …စိုးလွင် ပြန်လာပြီး မိတာ…….”
“ ပုလွေ မှုတ်နေတုန်း …မိတာပဲအေ…မောင်နှမ တွေပဲဟာ.”
တင်တင်နွယ် ၊ စမ်းစမ်း ၊ ခင်အေးဟန် တို့ သာမက အတာကပါ အူတက်မတတ် ရယ်နေကြလေတော့သည်..။
“ ဟဲ့ ကောင်မတွေ….ဘာရယ်နေတာလဲ…..ဟဲ့…….”
“ ပုလွေ မှုတ်တယ်ဆိုတာ….လီးစုပ်တာကို ပြောတာ မမမိုးရဲ့…ဘာဂျာမှုတ်တယ်ဆိုတာကစောက်ပတ်ယက်တာ……..”
“ ဟား……ထွီ…..ခင်အေးဟန် တော်တော့….ဖွီး….”
မမမိုးက စားလက်စ လက်ဘက်သုတ်ကို ဆိုင်အပြင်သို့ လှမ်းထွေးပစ်လိုက်ရင်း ခင်အေးဟန်ကိုလက်ကာပြသည်..။ ခင်အေးဟန်က အရှိန် မသေ…။ ဘရိတ်အုပ်၍ မရတော့ပဲ ဆက်တွန်းသည်..။
“ သူတို့ အဲဒီလို လုပ်နေတာ တွေ့တော့ စိုးလွင်က မူးမူးနဲ့…အိမ်အပြင်ထွက်ပြီး အော်တော့တာပဲ….ဟောဒီမှာ ကျုပ်လီးကို စုပ်ခိုင်းတုန်းကတော့ ရွံသတဲ့ဗျို့…..အခုတော့ မသိန်းကြည်ကြိုင်ဆန်းလီးကို စုပ်နေပါတယ်…ခင်ဗျ………တဲ့…….”
တင်တင်နွယ် အူတက်မတတ် ရယ်ရင်း သေးထွက်ချင်လာဟန်ဖြင့် အိမ်သာဆီ ပြေးသည်..။ စမ်းစမ်းကအနီးရှိ ဖြတ်စတစ်ထွေးကို ကောက်ယူပြီး ပါးစပ်၌ ဆို့ကာ အော်ရယ်သည်..။ တသိမ့်သိမ့်ခါရမ်းအောင်ရယ်သည်..။ မမမိုးက ရယ်ရင်း ထွက်ကျလာသော မျက်ရည်များကို ခါးကြားမှ လက်ကိုင်ပုဝါနှင့်သုတ်သည်…။
အတာက ခင်အေးဟန်ကို ရှုံ့မဲ့ကာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် တော်တော်ပြော ဟူသော သဘောနှင့်လက်ညှိုးထိုးပြသည်..။
“ အဲဒါ….လမ်းမှူး ဦးစိန်မှုံက ….ဘာဝင်ပြောတယ်…မှတ်လဲ……”
“ တော်ပါတော့ ဆို….”
“ ကြိုင်ဆန်းက သကြားသုတ်ထားလားမှ မသိတာ တဲ့………”
မိန်းကလေး ငါးယောက် အပ်ချုပ်ဆိုင်လေး လဲပြိုမတတ် ဗြောင်းဆန်အောင် ကြိတ်ရယ်လိုက်ကြသည်..။အတန်ကြာမှ …မမမိုးက…
“ ညည်း တရား အမြဲ နာလို့လား မသိဘူး…ငါတောင် တော်တော်လေး သိလာပြီ….ဟင်းဟင်း……..”
“ မမမိုးကလဲ..ဗီဒီယိုတွေ မကြည့်ဖူးဘူးလား…..”
“ ဟဲ့….အိမ်မှာ ရှိနေတာပဲ…….ကြည့်တာပေါ့……..”
“ မှုတ်ဖူးလေ…..ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ လုပ်တဲ့ကားမျိုး……..”
“ ယောက်ျားက လေယာဉ် ဒရိုင်ဘာလဲ ဆိုသေးရဲ့…….”
“ ဟဲ့…….သူဖာသာ ကမြင်းချင်လို့ ကမြင်းသွားတာ…ခင်အေးဟန်…ငါ့လက်ထဲမှာ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲ……..”
“ ဟို……လေယာဉ်မယ်က ပုလွေမှုတ် ကျွမ်းလို့ပေါ့…….”
မမမိုး မျက်နှာ တစ်ချက်တွေ သွားသည်..။ တစ်စုံတစ်ရာကို စဉ်းစားဟန် ပြုသည်..။
“ ဟုတ်တယ်…..ငါ့ဖက်က အများကြီး လိုတာတွေ ရှိတယ်……”
“ ဒါကြောင့် ပြောတာ…မမမိုးရဲ့..ဗဟုသုတဆိုတာ မလုပ်ချင်မှနေ…သိတော့သိထားရမယ်လေ….မှုတ်ဘူးလား……”
“ ငါတော့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကြောက်တယ်……….”
“ ဟုတ်တယ်…..အေအိုင်ဒီအက်စ်…ကတော့ လမ်းဆုံးပဲ…”
စမ်းစမ်းက လက်ဖက်ဇွန်းကို လှမ်းယူရင်း ဝင်ထောက်ပေးသည်..။
“ သူ….ငါ့ကို တစ်ခါ ခိုင်းဘူးတယ်….သိလား……”
“ မမမိုး ယောက်ျားကလား…..”
“ အေးပေါ့….ငါက ရွံတယ်…မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ဆိုတော့ နောက်ထပ် တစ်ခါမှ မခိုင်းတော့ဘူး……”
“ ဘယ်တော့မှလဲ ပြန်မလာတော့ဘူး မဟုတ်လား…..”
မမမိုး မျက်လုံးအိမ်၌ မျက်ရည်ကြည်များ ဝေ့ဝဲပြည့်လျှံလာနေသည်..။ နောင်တ…မျက်ဝန်းများ၌ဆွေးရိပ်တို့ သမ်းနေကြသည်..။
“ ဒါ…သက်သက် အနိုင်ကျင့်တာပါ….မစုပ်ပဲနဲ့ လုပ်လို့ ရနေတာပဲ…လုပ်ပေါ့…တစ်ခါတည်း….သက်သက်ရောဂါ ရှာတာ…”
“ ဒီမယ်….ခင်အေးဟန်…ညည်းယောက်ျား ကျမှ ညည်းဖာသာ စုပ်…သိလား….”
အတာက နှုတ်ခမ်းတလန် ပန်းတလန်နှင့် ကြိတ်ပြီး အော်သည်..။
“ စုပ်မှာ…စုပ်မှာ..မပူနဲ့…ဟင်းဟင်း…ပြတ်ထွက်သွားအောင်ကို စုပ်ပေးလိုက်မယ်……မှတ်……”
“ စုပ်….စုပ်….အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်မှ ကယ်ပါယူပါ မလုပ်နဲ့….”
“ ကဲဟေ့….တစ်နာရီ ထိုးတော့မယ်….အလုပ်စကြရအောင်…”
“ အယုတ်တမာ ကောင်မ…လက်ဖက်ပန်းကန် ညည်းသိမ်း…….”
“ ရတယ်…ခင်အေးဟန်တို့က အစုပ်တို့ အယက်တို့ ကျွမ်းပြီးသား..”
ခင်အေးဟန်က လက်ဖက်ပန်းကန်ကို လျှာနှင့် ယက်ရင်း ပြောလိုက်သည်..။ အတာက စက်ခုံတွင်ထိုင်လိုက်ရင်း ခင်အေးဟန်ကို ကြည့်ကာ သက်ပြင်း တစ်ချက် ရှိုက်လိုက်မိလေသည်..။
အဲသလိုပဲ….အတာ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိသည်..။ ခါးတွေ ကိုက်နေသည်..။ ဆီးစပ်က ကျင် ကျင်ပြီးနာသည်..။ ရာသီလာရက်က ကျော်နေပြီ…တစ်ခါတစ်ရံ ထိုးအောင့်သေးသည်..။
“ သမီး…ဘာဆေး သောက်ထားလဲ……ဟင်….”
အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခုဆိုတော့ ပြောရခက်သည်.။ သည်အထဲ အမေက လေဖြတ်ထားသေးသဖြင့်ကိုယ်တစ်ခြမ်းက သေနေသည်..။
ခြေရင်းဘက်အိမ်မှ အမေကြည်ကို လှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်သည်..။ ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက်မို့အိမ်တံစက်မြိတ်ချင်းက ထိကပ်နေကြသည်..။
အမေကြည် ခါးကုန်းလျက် အိမ်ထဲဝင်လာသည်..။ အသက် ၆၀ ခန့် ရှိပြီဖြစ်သော အမေကြည်ကလက်သည်လည်း ဖြစ်သည်…။
“ အောင့် ပြန်ပလား…တာတာ…….”
အမေကြည်က တစ်ခြမ်းတင်ထားသော ခြင်ထောင်ကို လုံးထွေးစုပြုံပြီး တင်ပေးပြီးမှ အတာ့ဘေး၌ဝင်ထိုင်ရင်း တိုးတိုးမေးသည်..။
“ ဟုတ်တယ်…အမေကြည်ရယ်….အလုပ်လဲ ပျက်တာ တစ်ပတ်လောက် ရှိနေပြီ…ဒုက္ခပါပဲ…ကြည့်လုပ်ပါအုံး…..”
“ ဟိုလက ရော ရက်ကျော်သေးလား…သမီး…..”
“ ဘာမှ မဖြစ်တာ ၃ လလောက် ရှိပြီ…အမေကြည်ရဲ့…..”
“ အဖြူ ဆင်းသေးလား……ဟင်…..”
“ ဟင့်အင်း…မဆင်းဘူး….သွေးမပေါ်တာပဲ ….အဲဒါ…”
“ အေးပေါ့ အေရဲ့….သွေးမပေါ်လို့ အောင့်တာ….အင်း..ငါထင်တာတော့ ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့ အေ…….”
အမေကြည့် ထရံကြားမှ နှီးတစ်စကို လှမ်းချိုးကာ သွားကြားထိုးရင်း ပြောလိုက်သည်..။ တာတာကအမေကြည်ကို ကြည့်သည်..။
“ ဘယ်လို….ဘယ်လို ..ထင်တာလဲ ဟင်….အမေကြည်….”
“ ညည်း…ငယ်ငယ်ထဲက ဖင်မဆော့တတ်တာရယ်…..ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှ ဘာမှ မဖြစ်တာရယ်……..”
“ ဟဲ့…အပျိုဖြစ်လာရင် သားအိမ်ဝမှာ အမှေးပါး ရှိတယ်ဟဲ့…….အဲဒီ အမှေးပါးက သားအိမ်ပြွန်ဝအထိပိတ်နေရင် သွေးမဆင်းတော့…အပုတ်ဆန်ပြီး သေတောင် သေနိုင်တယ်….ဘာမှတ်လဲ……”
“ ဟင်….ဒါ…….ဒါဆို…တာတာ…ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ….အမေကြည် ဟင်…သမီးကို ကယ်ပါအုံး…အမေကြည်ရယ်…”
အမေကြည့် သွားကြားထိုးပြီးသား နှီးစကို ကြမ်းကြားမှ ချပစ်လိုက်သည်..။
“ ညည်းမှာ ….ရည်းစားသနံလေး ဘာလေး မရှိဘူးလား…….”
“ အာ….ဘယ်ရှိအုံးမှာလဲလို့….တာတာက (—) နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဥစ္စာ…ကို….အမေကြည်ကလဲ ဘာတွေမေးမှန်း မသိဘူး…”
အတာက ဝိုင်းစက်သော မျက်ဝန်းလေးများ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လုပ်ရင်း ငြီးတွားရင်း ခေါင်းကိုစုံကိုင်ကုတ်သည်…။
“ ဒီမယ်….ရှက်မနေနဲ့….သေတတ်တယ်…ကြားလား..ကိုယ့်ကောင်လေး ဘာလေး ရှိရင် တစ်ညလောက်အအိပ်ခံလိုက်…ညီးရဲ့ ရောဂါ နင်နေ ငါသွားပဲ…ဒါမျိုးက သေရင်သေ မသေရင် ရူးတတ်တယ်….တော်ရေ့..”
“ ဟဲ့….ကြံကြီးစည်ရာ..အိမ်ရှေ့မှာ ဘယ်က ကားပါလိမ့်…”
အမေကြည် ထွက်သွားသည်..။ တစ်စုံတစ်ယောက် စကားပြောသံ ကြားရသည်..။ မကြာခင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အခန်းထဲ ဝင်လာသည်..။
“ အေးလေ…တို့က အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ်တော့ ကူရပြီ မှတ်တာ……..”
“ အတာ အလုပ်မဝင်တာနဲ့ အထည်တွေ ပုံကုန်တာ…”
“ အတာရယ်…နေမကောင်းဘူးသာ ပြောတယ်…ပိုတောင်မှ ဝလာသေးတယ်…၊ အသားအရေကလဲစိုပြီး….ဝင်းလို့….”
“ ဆရာဝန်မ တစ်ယောက်လာပြီး ဆေးထိုး ဆေးစား လုပ်ခိုင်းတယ်…. မမမိုးရဲ့ ..ပိုက်ဆံပေးလဲ မယူဘူး….သိလား……”
“ ဟဲ့…..နင့် ဥစ္စာ….က..”
အတာကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါက်တာ ယဉ်ယဉ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုချိန်ထိ စဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်နေရတုန်း…။
“ အဲဒါ..လာမဲ့အပတ်ထဲ အမေ့ကိုလဲ ဆေးရုံတင်ပေးအုံးမယ်တဲ့…လေ..၊ အမေ့ရောဂါကအတော်ဆိုးလာတာ…မမမိုးရဲ့….”
ဘုရားမမ …သိကြားမမ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒေါက်တာယဉ်ယဉ်ကိုပဲ အတာ ကျေးဇူးတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး တင်နေမိလေသည်..။
“ အန်တီ…ဒီနားမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ လာကြည့်ရင်း အမေကြည်နဲ့ တွေ့ပြီး သမီးကိုကူညီဖြစ်သွားတာကွဲ့…..”
ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကိုမှ ရွေးပြီး ဆေးခန်းဖွင့်လိုသော ဒေါက်တာယဉ်ယဉ်၏ ဆေးခန်းလေးဖြစ်မလာသေးသော်လည်း အတာတို့ အမေကိုတော့ မိသားစုဆရာဝန်အလား ဂရုတစိုက်လာကြည့်ပေးတတ်သည်..။ ဒေါက်တာယဉ်ယဉ် စီးလာသော တိုယိုတာ ကော်ရိုလာ လေးနှင့် ရပ်ကွက်ကျောက်ခင်းလမ်းက ပနာမစားလှ..။
“ အန်တီ့ကို သမီး အရမ်းအားနာတာပဲ….”
“ အမယ်…ဟင်း….အန်တီ့ကို အားမနာနဲ့…အန်တီ့မှာက သားတွေရှိတယ်…တော်ရေ့…၊ချွေးမတော်ပစ်လိုက်မှာ…”
“ ဟင်..အန်တီ ကလဲ…..ဟင်း ဟင်း……”
ဒေါက်တာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်က အဆင့်အတန်း ခွဲခြားဟန် မပြ..၊ ဖြူစင် သန့်ရှင်းသော မေတ္တာကိုသာအစဉ်မပြတ် ပေးဝေတတ်သူ ဖြစ်သည်..။
“ ဟင်း…ဟင်း…ညည်းအမေကြည် ပြောတဲ့ ကုထုံးကြီးနဲ့သာ ဆိုရင်အေ…ရောဂါလဲပျောက်ဗိုက်လဲကြီးနဲ့….ပဲ…”
“ ဟဲ့…ဒါက သူသိသလောက် အကြံဉာဏ် ပေးတဲ့ဟာ…အဲဒါမျိုး ငါ ကြားဖူးတယ်….အေရဲ့….”
ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းဝိုင်းမှာ သတင်းဝိုင်း ဖြစ်လာသည်..။
“ ဟို….အင်္ဂလိပ် ခေတ်ကလေ…အရေးပိုင် သမီး တစ်ယောက် အဲဒီလို အောင့်တယ်…အောင့်တယ် ဆိုပြီးဆရာဝန်ဆီ သွားပြတာတဲ့…၊ ဆရာဝန်က ပထန် ကုလားကြီးတဲ့….”
“ ဟဲ့ အယ်….အမျိုးသမီး ဆရာဝန် နဲ့လဲ မဟုတ်ဖူး….”
“ အင်္ဂလိပ် ခေတ်က အမျိုးသမီး ဆရာဝန် ရှားလို့ နေမှာပေါ့…..ဟဲ့….”
တင်တင်နွယ်၏ ဝေဖန်မှုကို ခင်အေးဟန် မဖြေရသေးမီ စမ်းစမ်းက ဝင်ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။အတာနှင့် မမမိုးက ပိတ်အုပ်တစ်အုပ်ကို ညှပ်နေကြသည်..။
မမမိုးက စက်ခုံပေါ်သို့ ကပ်ကျေးကို လှမ်းတင်ပြီး ဖြတ်ပြီးသွားသော အထည်တစ်စကို သပ်သပ်ယပ်ယပ်ခေါက်နေရင်း မေးသည်..။
“ ပထန် ဆရာဝန်ကြီးက အားလုံးကို အပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ် …ဆိုပဲ…၊ ပြီးတော့ ကောင်မလေးကိုတစ်ကိုယ်လုံး ချွတ်ခိုင်းတယ်…၊ ဆရာဝန်က ခိုင်းတော့ ကောင်မလေးကလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ အဝတ်အစားတွေချွတ်ရတာပေါ့….”
“ ဒါပေါ့….ဒါပေါ့….နင်ဆိုလဲ ချွတ်ရမှာပဲ….”
“ချွတ်မယ်လေ……အိုး….ဘာဖြစ်လဲ….. သေသွားမှာ ရူးသွားမှာထက် စာရင်တော့ အများကြီး တော်သေးတယ်….”
“တင်တင်နွယ်….နင် မဖောက်စမ်းနဲ့ ဟာ….”
စမ်းစမ်းက ရှူးသိုးသိုးနဲ့ ဝင်ဟောက်လိုက်သည်..။ တင်တင်နွယ်က ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာနှင့် မမမိုးဖက် သို့ကြည့်သည်..။
“ ဝါသနာ မပါရှာဘူး…”
“ နေကြစမ်းပါ…..အကောင်းပြောမလို့ ဟာကို……..”
“ အေး အဲ…ဘယ်ရောက်သွားမှန်း တောင် မသိဘူး….နင်တို့ ဝင် ဝင်ရှုပ်တာနဲ့….”
“ အမလေး..ဟဲ့…ကောင်မလေး အဝတ်ချွတ်တာ….လေ….”
မမမိုးက မျက်စောင်းထိုးရင်း ခပ်တိုးတိုး ခါးကိုင်းပြီး ပြောလိုက်သည်..။ ခင်အေးဟန်က …ဟက်ခနဲရှက်ရယ်လေး ရယ်လိုက်သည်..။
“ ကောင်မလေးက အပျိုဖော် ဝင်စအရွယ်လေး..ရှိသေးတာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့..ဟယ်…၊နို့လေးတွေက လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ပန်းကန်လေး မှောက်ထားသလို သေးသေးလုံးလုံးလေးတွေ….၊အရေးပိုင် သမီးဆိုတော့ ဘော်ကြော့ နေရတာမို့လား….အသားလေးတွေက ဝင်းပြီး အိနေတာ…နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အစိမ်းရင့်ရောင် မမှည့်တတ်သေးတဲ့ စပျစ်သီးလို…မနုမရင့် လေး…..”
သရုပ်ဖော် ကောင်းလွန်းတဲ့ ခင်အေးဟန် ဇာတ်လမ်းသည် စစ်ကြိုခေတ်ဟောင်းမှ အဖြစ်ဟောင်းတစ်ခုဆီသို့ အားလုံးကို သယ်ဆောင် ခေါ်ယူသွားလေတော့သည်..။
ဆေးခန်းအတွင်း မျက်နှာကျက် အမိုးတွင် တတ်ဆင်ထားသော ပန်ကာကြီး တဝီဝီမြည်သံကစိုးမိုးနေသည်..။ ဖြူလွှသော ခုတင်ထက်တွင် အသက် (–) နှစ်ကျော်ရုံမျှ ရှိသေးသော ရိုစီလင်းသည်ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေသည်…။ ဆရာဝန်ကြီးက ဂါဝန်လေးပါ ချွတ်ခိုင်းထားသဖြင့် ကုတင်ဘေး၌အင်္ကျီနှင့် ဂါဝန်လေးကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ဖိကိုင်ထားကာ ဝတ်လစ်စလစ်လေး ပက်လက် အနေအထားလဲလျောင်းနေရသည်..။
လက်ဖျားလေးများ အေးစက်နေသည်..။ ဖြူဝင်း ဖောင်းအိသော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကြားမှစောက်ဖုတ်မို့မို့လေးက ခုံးခုံးလုံးလုံးလေး မာမာတင်းတင်းနှင့် ဖိုပေါ်က ချကာစ ပေါက်စီလေးနှယ်..ပူနွေးဖုဖောင်းနေသည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်သည် ပထန်အမျိုးသားကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည်..။ ရိုစီလင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြီး ကြည့်နေသော မျက်လုံးကြီးများက ဝင်းလက်နေကြသည်..။
ရိုစီလင်း၏ ခြေရင်း၌ ရပ်ရင်း ကုတင်အစွန်းကို လက်ထောက်လျက် ခါးကိုကိုင်းရင်း စောက်ဖုတ်လေးကိုအနီးကပ်ကြည့်လိုက်သည်..။ ပထမတွင် ရိုစီလင်းက ဘာများလုပ်မလဲ ဟူသော အတွေးနှင့်ဒေါက်တာဖိလစ် ငုံ့ဆင်းသွားရာ မိမိပေါင်ကြားသို့ ခေါင်းလေးထောင်လျက် လိုက်ကြည့်မိသေးသည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ် လက်တစ်ဖက်က ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို ဆွဲဖြုတ်လျက် ဘောင်းဘီကို လျှောချလိုက်သည်..။ခါကနဲ ရမ်းထွက်လာသော လီးကြီးက မြင်းကြီးတစ်ကောင်၏ သိုကြီးအလား ဝဖီးတုတ်ခိုင်ကြီးမားလှသည်..။စောက်ဖုတ်လေးကို ထူပြစ်မဲနက်သော နှုတ်ခမ်းမွှေး ကြမ်းကြမ်းများနှင့် မထိတထိလေး ပွတ်လိုက်သည်..။
ရိုစီလင်းက ပေါင်လေးနှစ်လုံးကို ပူးကပ်ရင်း ပြောသည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အသာအယာလေး ဆွဲဖြဲလိုက်လေသည်..။ ထိုအခါ ရိုစီလင်း၏စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းလေးက နီနီရဲရဲလေး ပေါ်လာသည်..။ ချွန်မြသော အစိလေးက စောက်ပတ်ထိပ်၌နေရာယူထားပေသည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ် လက်တစ်ဖက်က ရိုစီလင်း နို့အုံလေးတစ်ဖက်ကို ဖွဖွလေး အုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်..။ရိုစီလင်း ဗိုက်သားလေး ဟက်ခနဲ လေရိုက်သလို လှုပ်ရှားသည်..။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ လူအမြင် မခံဖူးသောမိမိနို့လေးကို ယခုကဲ့သို့ လက်ဝါးကြီးဖြင့် အုပ်ကိုင်ခြင်း ခံရသောအခါ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးကြောများတုံ့ခနဲ ရပ်ဆိုင်းသွားသလိုပင်…။ ဖွဖွကိုင်ထားသော နို့လေးကို တဖြေးဖြေးတိုး၍ တိုး၍ တင်းတင်းလေးဖြစ်ညှစ်လိုက်ကာ ဆုတ်နယ်ချေမွလိုက်သည်..။
ရိုစီလင်းခါးလေး ကော့သွားကာ စောက်ဖုတ်လေး မောက်တက်လာသည်..။ ထိုအချိန်ထိ ဒေါက်တာဖိလစ်လက်တစ်ဖက်က ဂွကြားမှ လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးလေး ဂွင်းတိုက်နေဆဲ ရှိသည်..။ လီးထိပ်ကြီးက ခရမ်းညိုသီးကြီး ထိပ်သဖွယ် ကြီးမားလှသည်..။ ကုတင်ခြေရင်း အစွန်းသို့ကျွံထွက်နေသော ရိုစီလင်း ခြေနှစ်ဖက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ဒူးထောင်ပေါင်ကား လုပ်ပေးလိုက်သည်..။စောက်ပတ်လေးထဲမှ အတွင်းသားရဲရဲလေးကို စတင်မြင်ရသည်..။
စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်က ခပ်ထူထူးလေး ဖောင်းနေပြီး ကြာလှပြီဖြစ်သောဖိကပ်ပူးတွဲနေရမှုကြောင့် အရေပြား အတွင်းသားလေးများက ပန်းနုရောင် ရင့်ရင့်လေး..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း၏ အပြစ်ကင်းစင်သော မျက်နှာလေးနားသို့ မျက်နှာချင်း ကပ်လိုက်သည်..။
“ ဒေါက်တာ မေးမယ်….မှန်မှန်ဖြေပါနော်…”
ဒေါက်တာ့ အသံက တိုးညှင်းပြီး တုန်ခါနေသလို အသက်ရှူသံကြီးက ခပ်ပြင်းပြင်း မြန်နေသည်..။ဒေါက်တာသည် အဝေးက ပြေးလာသူနှယ် အသက်ကို ပြင်းပြင်း ရှူနေခြင်း ဖြစ်သည်..။
ရိုစီလင်းက သူမနို့လေးကို တရွရွပွတ်သပ်ပေးနေသော ဒေါက်တာ၏ လက်ခုံပေါ်သို့ သူမလက်ကလေးကိုတင်ထားရင်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှ မျှင်းမျှင်းလေး ဖြေသည်..။
“ သမီးလေး…..အလိုးခံဖူးပြီ လား…..”
ခေါင်းလေးတစ်ချက် ခါရင်း တစ်ဖက်သို့ မျက်နှာကို လွှဲလိုက်မိသည်..။
“ မရှက်နဲ့နော်…အမှန်အတိုင်းပဲ ပြော……..”
ဒေါက်တာဖိလစ်က စကားပြောရင်း နို့လေးကို ပြောင်းရွှေ့အုပ်ကိုင်ကာ ဆုတ်ညှစ်လိုက်ပြန်ရာ ရိုစီလင်းခါးလေး ကော့သွားကာ ထောင်ထားသော ဒူးကြီးနှစ်ချောင်းက ဒေါက်တာ ဖိလစ်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညှပ်လိုက်မိလေသည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က သူ့လီးကို ဖြဲလိုက်စုလိုက်လုပ်နေသော လက်ကို ရိုစီလင်းစောက်ဖုတ်လေးပေါ်သို့ကူးပြောင်း၍ အုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ လက်ကို ခပ်ခုံးခုံးထားလျက် ရွရွပွတ်သည်..။ နို့ကို ကိုင်ထားသောလက်ကလည်း မနားတမ်း နယ်ပေးသည်..။
ရိုစီလင်းက ယားတတ်သူလေးပီပီ အရယ်တဝက်အရှက်တပိုင်းနှင့် ခေါင်းလေး မော့ခါရင်းလူးလိမ့်သွားသည်..။ လက်နှစ်ဖက်စလုံးက ကုတင်ဘောင်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ကျစ်ကျစ်မြဲမြဲလေးကိုင်ထားသောကြောင့် လက်မောင်းကြောလေးများ တင်းထောင် ဖောင်းကားလာစေသည်..။
“ ဒီအထဲက ..အခု ဘယ်လိုနေလဲ …သမီး….”
စောက်ဖုတ်အကွဲကြားသို့ လက်ညှိုးကို လက်တစ်ဆစ်မျှ ထိုးသွင်းကာ အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းစုန်ကာဆန်ကာ ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်..။
ငလျင်လှုပ်သည့်နှယ် ရိုစီလင်း တစ်ကိုယ်လုံး သွက်သွက်ခါနေသည်..။ ခါးကိုကော့လိုက် ကုတင်နှင့်တင်ပါးကို ဘုံးခနဲ ရိုက်လိုက်ဖြင့် ထကြွလာသော ကာမစိတ်၏ နှိုးဆွမှုကို အလူးအလဲ ခံစားနေရသည်..။ခါးကိုကော့လိုက် ဖြူလွှသော အိပ်ယာနှင့် ဘုံးခနဲ ကျလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရမ်းနေသဖြင့် ဒေါက်တာဖိလစ်၏လက်ညှိုးကလည်း ရိုစီလင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်မသွားစေရန် အလိုက်သင့် တက်လိုက်ဆင်းလိုက် လုပ်နေရလေသည်..။ တစထက် တစ ကြမ်းတမ်းလာသော ကောင်မလေး အမူအယာကြောင့်ဒေါက်တာဖိလစ်က လက်ညှိုးကို ထိုး၍ သွင်းလိုက်သည်..။
ပြွတ်ခနဲ လက်ညှိုးကြီး ဝင်သံနှင့်အတူ ရိုစီလင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဖျတ်ဖျတ်လူး တုန်ခါသွားလေသည်..။
“သမီး….. အကျယ်ကြီး မအော်နဲ့ နော်….သမီးလေး…နော်…..”
ဒေါက်တာဖိလစ်က လက်ညှိုးထိပ်က ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ငုံထားရသလိုပင် ပူနွေးနေသည်..။ လက်ညှိုးထိပ်တစ်ခုလုံး စောက်ရေလေးများ စိုရွှဲနေသည်..။ စောက်ခေါင်းဝ ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို လက်ညှိုးဖြင့်ဝိုက်မွှေကြည့်သည်..။ အချင်း ၃ လက်မကျော်ကျော်ခန့်သာ ရှိမည် ထင်သည်..။ မိမိလီးကြီးက လုံးပတ်ငါးလက်မနီးပါး မျှ ကြီးထားကြောင်း သိသည်..။
စောက်စိလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ တင်းမာနေပြီ…။ အိုခေ…ထိုအချိန်ကို ဒေါက်တာဖိလစ်စောင့်နေခြင်းပဲ ဖြစ်လေရာ ရိုစီလင်း နို့လေးကို ဆုတ်ကိုင်ချေမွ နေသော လက်အား နေရာပြောင်း၍ လီးကိုကိုင်လိုက်သည်..။
“ ကုတင် ခြေရင်းကို ဖင်တစ်ပိုင်း ကျအောင် လျှောလိုက်သမီး..”
ရိုစီလင်းက ခြေရင်းဘက်သို့ ခါးလေး ကော့ကာ ကော့ကာ တိုးရွှေ့သည်..။ ဖင်တစ်ပိုင်းကကုတင်စောင်းတွင် မကျတကျလေး မှေးတင်သွားသည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က ခါးအောက်သို့ စောင်ထူထူခေါက်၍ ထိုးသွင်းပေးလိုက်ရာ ပင်ကိုယ်က ဖုဖောင်းခုံးမို့နေသော စောက်ဖုတ် ခုံးခုံးလေးမှာ ကားစွံ့ဖောင်းကြွလျက် အလိုးခံရန် အဆင်သင့် အနေအထားသို့ ရောက်သွားလေတော့သည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က ကြမ်းပြင်တွင် မတ်တတ်ရပ်လျက် အနေအထားဖြင့် လီးကို ချိန်သားကိုက်တေ့လိုက်သည်..။ စောက်ပတ်နှင့် လီးက လုံးဝ အဆမတန် ကွာခြားနေသည်..။ လီးထိပ်ကြီးကပင်စောက်ပတ်ကို ဖုံးအုပ်မိမတတ် ကြိးမား နေသည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ်က အနီးရှိ ဆီတစ်မျိုးကို ယူ၍ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကိုသုတ်လိမ်းပေးလိုက်သည်..။ ရိုစီလင်းလေးခမျာ ကုတင်ဘောင်တစ်ဖက်စီကို တင်းတင်းကြီးဆုတ်ကိုင်လျက် အံလေးကြိတ်ထားရင်း အသားများ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် တုံနေရှာသည်..။ ရိုစီလင်း အံခဲ၍မျက်နှာလွှဲထားပုံလေးက သနားစဖွယ် ကောင်းလှသည်..။
သလင်းသား ကျောက်ဆစ်ရုပ်လေးနှယ် အချိုးအစားလှပပြေပြစ်သော ရိုစီလင်း ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အပေါ်မှမိုးကြည့်နေသော ဒေါက်တာဖိလစ် မျက်နှာကြီးက အဆီတွေ ပြန်နေသည်..။ ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး တုံရီနေမှုကို ကြည့်၍ ချက်ချင်းကြီး လိုးလျင် ပြဿနာ တွေများတက်ကုန်မလားဟူသော အတွေးက ဒေါက်တာဖိလစ် ခေါင်းထဲသို့ ဇနိုးဇနောင့် နှင့်ဝင်ရောက်လာသည်..။
ရိုစီလင်းက ပါးစပ်နှင့် မပြောပဲ ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင် ငြိမ့်ပြရှာသည်..။ အကယ်၍များ လီးဝင်သွားသည်နှင့်ဝုန်းဒိုင်းကြဲကုန်လျင် အခက်…။ ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း စောက်ပတ်ခုံးခုံးမို့မို့လေးကိုအနီးကပ်၍ အသေအချာ ကြည့်လိုက်မိပြန်လေသည်..။
စောက်ပတ်လေးက တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ အလိုးခံထားခြင်း မရှိသောကြောင့် တင်းမောက် လုံးကျစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်..။ သို့ဆိုလျင် မိမိ၏ မိန်းမပေါင်းများစွာ ကို ဖြိုနေသော ဧရာမ ရင့်ထော်နေသော လီးကြီးနှင့်ကွိုင်တွေ ပူလာနိုင်သည်..။ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ နိုင်မည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်ကစောက်ပတ်လေးထိပ်မှ အစိချွန်ချွန်လေးကို ဦးစွာ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာနှင့် ဖိညှပ်စုပ်ယူ လိုက်သည်..။
တင်းခနဲ ခံစားလိုက်ရသော ဝေဒနာကြီးကြောင့် ရိုစီလင်း စောက်ပတ်လေး ရှုံ့ခနဲ တင်းကျစ်စေ့ကပ်သွားပြီးစောင်ခေါက်ထူကြီးပေါ် မှေးတင်ထားသော ခါးလေး တွန့်လိမ်ကော့ပျံသွားသည်..။
အဟင့် ဟူသော ငိုငြီးသံလေး တစ်ချက် ထွက်ပေါ်လာတိုင်း ရိုစီလင်း ခန္ဓာကိုယ်လေးက ခါ ခါသွားရာဆက်ခါ ဆက်ခါ အဟင့်ဟင့် ဖြင့် ငိုငြီးလိုက်သောအခါ ပုခုံးနှင့် ဗိုက်သား ၊ နို့အုံလေးများပါတုန်ခါလှုပ်ရမ်းနေလေသည်..။
ခါးသေးသေးလေးဆီမှ သွယ်ဆင်းလာသော တင်ပါးကြီးများက ရိုစီလင်း ရှိုက်လိုက်တိုင်းလှုပ်ရမ်းလိမ့်လူးနေသည်..။ ပြေပြေလျောလျော လှပဖောင်းအိနေသော ဆီးခုံလေးမှာလည်းဒေါက်တာဖိလစ် ပါးစပ်နှင့် ဘယ်ညာ လွဲချော်လို့နေပြန်သည်..။ တရှူးရှူး တရှဲရှဲ အသက်ရှူရင်း ကာမစိတ်ပြင်းထန်နေသော ဒေါက်တာဖိလစ်ကမူ စောက်ပတ်လေး သွားရာသို့ ခေါင်းကြီးကို လိုက်ပါ ယိမ်းနွဲ့ရင်းအစိလေးကို မရအရ စုပ်ပေးနေလေသည်.။
“ အိုး….. အဟို့… ဟို့…. ရှီး….အ…. ဒေါက်…. တာ…… အီး…..အင့်..”
ရိုစီလင်း လက်ကလေးတစ်ဖက်က ဒေါက်တာဖိလစ် ဆံပင်များကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိပြီး ခပ်တွန့်တွန့်လေးလုပ်လိုက်သည်..။ စောက်စိလေးထဲမှ ကျင်ခနဲ ဖြင်းခနဲ ဝေဒနာသည် အဘယ်ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးတုံရီခါရမ်း စေပါသနည်း….။
စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း တင်းတင်းလေးကြားထဲသို့ လျှာကို စုချွန်ပြီး ရွရွလေး ထိုးပေးလိုက်ပြန်ရာရိုစီလင်း၏ ကျန်သော လက်တစ်ဖက်သည် ဒေါက်တာ ဆံပင်များကို တအားစုကိုင်မိပြီးသားဖြစ်သွားလေသည်..။ ရိုစီလင်း၏ စောက်စေ့လေးမှာလည်း တင်းခနဲ တင်းခနဲ ဖြစ်၍ လာလေတော့သည်..။
တင်းတင်းစေ့နေသော စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကြားမှ အရေကြည်လက်လက်ကလေးများ ကျောက်ကြားမှယိုစိမ့်စီးဆင်းလာသော ကျောက်သွေးလေးများနှယ် ဖြေးဖြေးချင်း စိမ့်ကျလာလေတော့သည်..။အသစ်စက်စက် စောက်ပတ်လေးသည် ဆပ်ပြာမွှေး ရနံ့လေး သင်းချိုနေသည်..။ စောက်ပတ်နှင့်ပေါင်ရင်းကြားတွင် ပေါင်ဒါ သုတ်လိမ်းထားဟန် တူသည်..။ မွှေးမြနေသည်..။ ရာဂစိတ်ထကြွနေသောဒေါက်တာဖိလစ်၏ စိတ်များကို မွှေးကြိုင်သင်းထုံသော စောက်ပတ်ရနံ့လေးက ပို၍ ပြင်းထန်စေရန်ဖန်တီးပေးသလို ဖြစ်နေပြန်လေသည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ်က စောက်ပတ်တစ်အုံလုံးကို ပါးစပ်ကြီးဖြဲ၍ ငုံခဲအုပ်ဖုံးပစ်ခါ ပါးစပ်ထဲ၌ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ လျှာကြီးကို ဒလစပ် ထိုးကလိ လိုက်သည်..။
ရိုစီလင်း၏ သာယာ၍ ချစ်စဖွယ်အသံလေးက အခန်းလေးအတွင်း လွင့်ပျံ့ ပေါ်ထွက်နေသည်..။ ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း မျက်နှာကို မော့ကြည့် အကဲခတ်လိုက်ရပြန်သည်..။ ကောင်မလေး ဖီလင်တွေဒလဟော တက်လာနေမှန်း သိလိုက်တော့မှ စိတ်အေးသွားကာ တင်းတင်းမာမာစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာ လက်မတစ်ခုစီဖြင့် ဂရုတစိုက် ဆွဲဖြဲလိုက်လေသည်..။
အူနီဖရဲသီးကြီးအလား ပြဲဟလာသော စောက်ပတ်အတွင်းပိုင်းလေးသည် နှစ်လိုဖွယ် ရဲရဲတောက်လှပနေသည်..။ စောက်ပတ်ကို နှစ်လက်မခန့် ဆွဲဖြဲပြီး လျှာကို ထိုးသွင်းကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို စုပ်လျက် အပေါ်သို့ ဆွဲတင် မယူလိုက်သည်..။ စောက်ပတ်အုံလိုက်ကြီးပါးစပ်ထဲ ပါလာသည်..။
ခပ်စူးစူး ခပ်တိုးတိုး ကြိတ်အော်သံလေး ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဒေါက်တာဖိလစ်ခေါင်းကြီးကိုအတင်းဆွဲဖိကာ စောက်ပတ်နှင့် မျက်နှာ ကော့ကော့ ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်..။
ဆီးခုံလေးက အတော်မာကျောကြောင်း ဒေါက်တာဖိလစ် တွေ့ထိခံစားလိုက်ရသည်..။ ပွယောင်းကြီးမားလှသော နှာခေါင်းထိပ်နှင့် ဆီးခုံ ဘတ်ခနဲ ရိုက်ခတ်မိမှ အမဲရွတ်ဆွဲသလို စုပ်ယူဆွဲထားလိုက်သောစောက်ပတ်အုံလေးကို ပါးစပ်အတွင်းမှ ဗြိ…ပြွတ်…ဟုမြည်ကာ ပြန်ကျသွားလေသည်..။
“ အီး……အိ……..ဟီး…….ဒေါက်တာရယ်….. ဟင့်……”
ရိုစီလင်း၏ နုနယ်ဝင်းပသော မျက်နှာလေးမှာ ချွေးသီးလေးများ စို့နေပြီး တုန်ခါနေသောနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှ ညီးညူသံလေးများနှင့် အတူ ဒေါက်တာရယ်…ဟု မချိမဆန့် ရေရွတ်သံများမကြာခဏ ထွက်ပေါ်လာနေပြန်သည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က ငုံဆဲ ဖူးဆဲ ပန်းပွင့်ကလေး၏ ဝတ်ရည်ချိုမြမြတို့ကို အတွင်းနှိုက် စုပ်ယူချင်နေသောပျားပိတုန်းကြီးအလား မရမကပင် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြဲပြန်သည်..။
စောက်ခေါင်းအတွင်းပိုင်းသည် ရဲရဲနီလျက် အသားစိမ်းနံ့ တစ်မျိုးကို ရှူရှိုက်မိလိုက်သောအခါသားကောင်အနံ့ရသည့် ရိုးမကျားကြီးအလား ဝုန်းခနဲ မာန်ဖီလိုက်သကဲ့သို့ လီးကြီးမှာ ရိုးရိုးစင်းစင်းကြီးတောင်နေရာမှ ထောင်းခနဲ ထောင်းခနဲ ခုန်၍ ခုန်၍ သွားလေသည်..။ စောက်ခေါင်းအဝ ပတ်ပတ်လည်ကို လျှာထိပ်ဖြင့် အသာအယာ ဝိုက်ဆွဲလေး ဆွဲပြီးစောက်စိအောက်ခြေအရင်းကြားသို့ လျှာဖျားကို ထိုးထည့် ကလိပစ်လိုက်လေသည်..။
ကောင်းလိုက်တာဟူသော သဘောနှင့် ရိုစီလင်းက ရက်စ်ဟု တိုးတိုးလေး အံကြိတ်၍ အော်ရှာသည်..။ဒေါက်တာဖိလစ် စောက်စိလေးကို နောက်ဆုံး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာနှင့် ခပ်တင်းတင်းဆွဲယူစုပ်တင်လိုက်ရာ….စောက်ပတ်လေးမှာ တင်ခံမနေနိုင်ရှာတော့ပဲ ဟစိဟစိ ဖြစ်သွားသည်..။ ထိုအခါကျမှ ဒေါက်တာဖိလစ်က သူ၏ မြင်းလီးကြီးတမျှ တုတ်ခိုင်ကြီးမားလှသော လီးးတန်ကြီးကိုတပြွတ်ပြွတ် ကိုင်ဆောင့်ရင်း ရိုစီလင်း၏ စောက်ခေါင်းအဝသို့ တေ့သွင်းထားလိုက်ခါ ကုတင်ဘောင်ကိုလက်ထောက်လိုက်သည်..။
“ သမီး ..သားအိမ်လမ်းကြောင်း ပွင့်သွားအောင် လိုးပေးမလို့လေ… ဒါမှ သမီး ရာသီမှန်မှန် လာမယ်…ဝေဒနာ သက်သာသွားမယ်….နော်…..”
“ အိုး…ကျမ …ဟာလေးက သေးသေးလေးရယ်…..ရှင့်…..”
“ ဘာလဲ..သမီး က မဝင်မှာ စိုးလို့လား…ဟဲဟဲ…”
“ ကျမ ကျမ…. အရမ်းနာမှာ ကြောက်တယ်….”
ဟုတ်မလိုလိုနှင့် ငြိမ်နေပြီးမှ ရိုစီလင်း ခေါင်းတခါခါ လုပ်နေပြန်သောကြောင့် ဒေါက်တာဖိလစ်ချော့ရပြန်သည်..။ စကားပြောဆို ချော့မော့နေစဉ် ဒေါက်တာဖိလစ် လက်တစ်ဖက်က နို့အုံလေးကို၎င်း ၊ဗိုက်သားလေးများကို ၎င်း ၊ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်..။ ကျန်သောလက်တစ်ဖက်ကလည်းစောက်စိထိပ်ကလေးကို မနားတမ်း ဒလစပ် ကလိပေးနေရသည်..။
လီးထိပ်က တကယ်ပဲ စောက်ခေါင်းဝ၌ တစ်ဆို့နေသည်..။ စောက်ပတ်အတွင်း အခေါင်းဝအရေပြားပါးပါးလေးများကို ဖိထောက်ထားမှုကြောင့် စောက်ပတ်လေးက ချိုင့်ဝင်ကာ တင်းတင်းလေးတစ်ဆို့နေခြင်း ဖြစ်သည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း၏ အံကြိတ်ညည်းတွားသံလေးကို နားထောင်ရင်း ပို၍ ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြလာရာတိုးပြီး ဖိသိပ်လိုက်သည်..။
ပို၍ ခပ်နာနာလေး ဖိလိုက်ပြန်သည်..။ စောက်ပတ်က ပိုချိုင့်ဝင်ကာ နိမ့်ဆင်းသွားပြီး ဆီးခုံလေးမောက်တက်လာသည်..။ ခါးလေးမှာ ကော့တက်သွားပြီး မွေ့ယာနှင့် လွတ်နေသည်..။ လီးထိပ်မှာပင်တင်းရင်းသော အာရုံ ကို ထိတွေ့ခံစားနေရသဖြင့် ရိုစီလင်းကဲ့သို့ အသားနုကို ထိုးထောက်ခြင်းခံထားရသော မိန်းခလေးအဖို့ မည်မျှ နာကျင်နေမည်နည်..။
“ ရှူး…ပြတ်….ရှူး…….အင်း…အင်း…. ဟင်း.. ဟင်း……”
ရိုစီလင်းက နှုတ်ခမ်းနီစွေးစွေးလေးကို လျှာဖြင့် ယက်ရင်း ယက်ရင်း တဟင်းဟင်း အော်နေရှာသည်..။မော့ထားသောကြောင့် မျက်လုံးအိမ် ထောင့်မှ ပုလဲလုံးလေး သုံးလေးလုံး လိမ့်ဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်..။
“ သမီး….ပေါင်ကို ခပ်ကားကားလေး လုပ်ပေးထား…နော်…..”
ဖွေးလွှတင်းကျစ်သော ပေါင်တံအရင်းမှ အကြောကြီးများ ထောင်လာအောင်အထိ ရိုစီလင်း ပေါင်ကိုကားပေးလိုက်ရှာသည်..။ လီးထိပ်ပိုင်းမျှလောက်သာ အဝင်ပြထားသော ရိုစီလင်း စောက်ခေါင်းလေးသည်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေသည်..။ ချွေးပြန်လာသော ဒေါက်တာဖိလစ်က မေးရိုးကြီးများ ထောင်ထလာအောင်အံကိုကြိတ်လိုက်သည်..။ ရိုစီလင်း၏ ဝေဒနာခံစားနေရသော မျက်နှာလေးကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်..။ထို့နောက် ဖတ်ခနဲ အားနှင့် ဆောင့်ချလိုက်သည်..။
ဒေါက်တာဖိလစ် လက်ဝါးကြမ်းကြမ်းကြီး တစ်ဖက် ရိုစီလင်း ပါးစပ်လေးကိ လျှင်မြန်စွာ လှမ်းပိတ်လိုက်ရာအသံကျယ်လောင်စွာ မထွက်တော့ပဲ လုံးထွေးတိမ်ဝင်သွားလေသည်..။ ရိုစီလင်း မျက်လုံးလေးများပြူးလန်သွားရှာသည်..။ လက်နှစ်ဖက်က ဒေါက်တာဖိလစ် လက်မောင်းကို ကုတ်ခြစ်ကြသည်..။အသားဖြူသော ဒေါက်တာဖိလစ် လက်မောင်းနှစ်ဖက်တွင် ချွန်ထက်သော လက်သည်း အစင်းရာကြီးများထင်ကုန်လေသည်..။
လီးတန်ကြီးက ကျဉ်းမြောင်းသော စောက်ခေါင်းအတွင်း တစ်ရစ်ခြင်း နိမ့်ဆင်းသွားပြီး ဒုတ်ခနဲ ခပ်အုပ်အုပ်အသံလေးထွက်လာကာ လီးထိပ်နှင့် လုံးလုံးချောချော အရာတစ်ခုတို့ ထိုးတိုက်မိသည်..။ သားအိမ်ဝ သားအိမ်ခေါင်းနှင့် လီးထိပ်တို့ ထိပ်တိုက် ဆုံဆည်းမိကြမှန်း ဒေါက်တာဖိလစ်သိလိုက်လေသည်..။ မိမိ လီးတန်ကြီးကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သောအခါ တဝက်ပင် မရှိသေး….။
လီးတစ်ချောင်းလုံးမှာမူ လက်နှင့် ဖြစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်ထားသလို တင်းတင်းကြီး ခံစားနေရသည်..။စောက်ခေါင်းဝရှိ သန်မာလှသော အသားမျှင် တဝိုက် ကြိုးနှင့် ရစ်စည်းထားသလို ပိုတင်းသည်..။
“ အင်း………ဟင်း ဟင်း ဟင်း….. အင်း…. ဟင်း…….”
ဒဏ်ရာရနေသော သမင်မလေး သဖွယ် မျက်လုံးလေး မှေးကာ နှုတ်ခမ်းလေးများ တဆတ်ဆတ် တုံရင်းညီးနေရှာပြီး ဒေါက်တာဖိလစ် အမေးကိုပင် ခေါင်းငြိမ့်၍ မဖြေနိုင်ပဲ မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြလျက် မျက်လုံးကိုသနားစဖွယ် ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရှာသည်..။
“ ပေါက်သွားပြီ…..သမီးရဲ့….သမီး နောက်မနာတော့ပါဘူး…..”
“ အင်း…….ဟင်းဟင်း…ဒေါက်….တာ့ ဟာကြီး ဆက်သွင်းအုံးမှာလား..ဟင်…….”
“ မသွင်းတော့ဘူး…လေ…..တဝက်ပဲ လိုးပေးမှာပေါ့……”
လေသံယဲ့ယဲ့လေး ဖြင့် ဟုတ်ကဲ့ ဟု ချိနဲ့စွာ ဆိုလိုက်သည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်က လီးတန်ကြီးကိုဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲနှုတ်သည်..။ စုပ်ယူထားခြင်း ခံနေရသော လီးတန်ကြီးအပေါ်မှ အကြောကြီးများဖောင်းကြွား တင်းကားလျက် တစ်ရစ်ချင်း ထွက်လာသည်..။
“ အား…ဟာ……မဟုတ်ပါဘူး…သမီးလေး စောက်ပတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေက လီးမှာပေကျံနေလို့….မြည်တာပါ………”
ရိုစီလင်း မျက်နှာလေး ရဲခနဲ ဖြစ်သွားရင်း တစ်ဖက်သို့ လှည့်စောင်းလိုက်သည်..။ ဒေါက်တာဖိလစ်ကပန်းနုရောင် ပါးလေးကို ငုံ့မွှေးလိုက်ရာ လီးကြီးက စွပ်ခနဲ ဝင်သွားပြန်ရာ ရိုစီလင်း ဖင်လေးလူးလိမ့်သွားပြန်သည်..။
“ ပေါက်သွားပြီဆို….. မပြီးသေးဘူးလား…..”
“ ဒေါက်တာ ကောင်းအောင် နဲနဲ လိုးအုံးမယ်လေ….မဟုတ်ဖူးလား…ဟဲဟဲ….သမီးလဲ ကောင်းမှာပါ…..”
ရိုစီလင်းက မသိမသာ မျက်စောင်းလေး ထိုးရင်း တစ်ဖက်သို့ လှည့်သွားသည်..။
“ အို့ဟိုး……ဟိုး……..အိုး…..ရှီး……အ…. အင့်…….”
ဝလုံးလေးနှယ် ဝိုင်းစက်သွားသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှ နင့်နင့်နဲနဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဝင်ဝင်သွားသော လီးဒဏ် ခံနေရသံများ အဆက်မပြတ် ထွက်လာလေသည်..။ မျှင်းမျှင်းလေး လိုးပေးနေသောကြောင့် ခံရသည်မှာ စအိုဝတိုင်အောင် အရသာက စူးရောက်သွားပေရာစောက်ပတ်သို့ လီးကြီးဝင်သွားတိုင်း မျက်လုံးများက အလိုလို မှေးစင်းသွားလေသည်..။
ဖြေးဖြေးလေးသွင်းချလိုက် ညင်ညင်သာသာလေး ဆွဲထုတ်လိုက်ဖြင့် ပါးနပ်စွာ လိုးနေသော ဒေါက်တာဖိလစ်လထစ်ကြီးက လထစ်နှင့် စောက်ခေါင်းဝ အရေပြား အဝိုင်းလေး ဆုံမိတိုင်း ဒစ်ကို သားရေကွင်းနှင့်စည်းထားခံရသလို ခံစားနေရပေရာ ဒေါက်တာဖိလစ်မှာ အရသာ ထူးကြီးတွေ့ရင်း လီးကြီးမှာ တုံ့ခနဲ တုံ့ခနဲခါရမ်းသွားပြီး သုတ်ရေများ ထွက်ကုန်လေတော့သည်..။
“ ဟင်…..ဒေါက်တာ….သေးပေါက်ထည့်လိုက် တာလား.ဟင်……”
“ ရှူး….အဟင်း…ဟင်း…မဟုတ်ပါဘူး..ခလေးရယ်..မင်းလေးရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရတာ
ကောင်းလွန်းလို့ အရေတွေ ထွက်ကုန်တာ…အား အား….ကောင်းလှချည်လား…ချာတိတ်ရယ်……”
ပြောပြောဆိုဆို ဒေါက်တာဖိလစ်က ရိုစီလင်း နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကို ငုံ၍ စုပ်လိုက်ပြီး လျှာ ချင်းကလိပေးလိုက်ရာ….။
ကော့တက် ခုံးထလာသော ရိုစီလင်း စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီးတံကြီး ဖိသွင်းလျက် ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲလိုးဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ကောင်မလေးမှာ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများ ကျလာသည့်ကြားမှ ဒေါက်တာဖိလစ်ကျောပြင်ကြီးကို ကုတ်ခြစ်ဖက်တွယ်ကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ဒေါက်တာဖိလစ် ခါးကို ကပ်ကျေးသဖွယ်တင်းတင်းကြီး လိမ်ညှစ်လိုက်လေတော့သည်..။
မျက်နှာကျက်မှ ပန်ကာက တာဝန်ကျေစွာ လည်ပတ်ဆဲ…၊ ကာမအရသာထူးကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ခံစားလိုက်ရသော ချာတိတ်မလေး ရိုစီလင်းနှင့် အသက် ၄၀ ခန့် ဒေါက်တာဖိလစ် တို့ကမူ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ရင်း နောက်တစ်မျိုး ကုန်းပြီးလိုးရန် …တိုင်ပင်နေကြလေသည်..။
“ ကောင်မတွေ …တစ်နာရီတောင် ကျော်သွားပြီ…နော်….တော်ကြတော့…”
မမမိုးက လှမ်းပြောလိုက်မှ ခင်အေးဟန်က ….
“ နောက်တစ်မျိုး ကုန်းခိုင်းပြီး….လိုးသေးတာ….”
ဟု အစချီပြီး မှ စကားစကို ဖြတ်လျက် စက်ခုံအသီးသီးသို့ ထိုင်မိကြလေသည်..။
“ ဟင်း…ပေါက်ကရတွေ ကြပ်ကြပ်ပြော…ညည်းတို့ လင်တွေ အစောကြီးရမဲ့ ဟာမတွေ…ဟင်း……”
မမမိုးက ပိတ်စကို ရွှမ်းခနဲ ဆွဲထုတ်ရင်း တတွတ်တွတ် ပြောသည်…။
“ ကောင်းတာပေါ့….မမမိုးရဲ့..ထိုင်စားရတာပေါ့.. အခုတောင် အလုပ်လုပ်လာရတာ..ဘတ်စ်ကားတိုးရပြေးလွှားရနဲ့…”
“ အံမယ်…လင်ကောင်းသားကောင်း ရရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့…ညည်းယူတဲ့ အကောင်က အရက်ဖိုးပြန်တောင်းနေမှ….ဟင်း..”
“ ဖွဟဲ့…မပြောကောင်း မဆိုကောင်း…လွဲပါစေ…”
“ မောင်မောင်လို စပရင်တာစီးနိုင်တဲ့ လူမျိုး ရှာယူပေါ့……”
တင်တင်နွယ်က အပ်ပေါက်ထိုးရန် အပ်ချည်စကို ကပ်ကျေးဖြင့် ဆတ်ခနဲ ညှပ်လိုက်ရင်း ပြောသည်..။အတာက တင်တင်နွယ်ဆီ သို့ တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်ပြီး ဘာမှ မပြောပဲ စက်သံ တဂျုံးဂျုံး မြည်အောင်ဖိနင်းပစ်လိုက်လေသည်..။
“ အဟင်း….ဟင်း….ကိုယ့်ဘဝအတွက် စိတ်ချနေရသူတွေကတော့ ဘာမှကို မပြောကြဘူး…နော်…….ဟင်းဟင်း……”
“ မိတင်တင်…..ညည်းနော်…အဲဒီကောင်ကို ညည်းပဲယူ…….”
“ အံမာလေး….ယူပါတော့…ယူပါတော့…..တင့်တောင့်တင့်တယ်လဲ နေရမယ်… လူလဲ သက်သာမယ်ရုပ်ကလေးကလဲ ဖြောင့် ဟိုဒင်းလေးကလဲ တောင့် ဆိုရင်လေ နေ့တိုင်းကို ပုလွေ မှုတ်နေမှာ……”
“ ထွီ…..အယုတ်တမာ မ……….”
“ အိုး…ကိုမောင်မောင်လိုသူသာ ငါ့ယောက်ျားဖြစ်ကြည့်ဟင်း…ရေတောင် မဆေးရဘူး…အပြတ်ပြောထားတာ….”
“ ဟဲ့….အဲဒါ…ဈေးကောင်းကောင်း အေရဲ့..ဘာသိလဲ..စမ်းစမ်း ကောင်လို ဘာအလုပ်မှ မရှိ ၊ ဖအေဆိုဆိုက်ကားနင်းတဲ့ အထဲက ခိုးပြီး ရည်းစားနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံ သွားတဲ့ ကောင်မျိုး မှ ဈေးကျတာ…. ဖအေနဲ့ဆိုက်ကားလဲ ဝိုင်းမနင်း ဘောင်းဘီ ခါးက မချ…”
တင်တင်နွယ် စကားမဆုံးခင် စမ်းစမ်းက အိမ်သာမှ ပြန်လာသည်..။
“ ဘာလဲ ဟင်….ငါ့နာမယ် ပြောသံ ကြားပါတယ်……”
“ ဟဲဟဲ…အလကားပါ နင်သေးပေါက်တာ..ကြာလိုက်တာလို့ ပြောတာ..ဟဲဟဲ..နော် အတာ……”
မမမိုးက သူတို့ မိန်းခလေးတစ်သိုက်ကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်း ရှိုက်လိုက်မိလေသည်..။
မမမိုးတစ်ယောက် ဆိုင်နားရက်မို့ အိမ်တွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး အပ်ချုပ်ဆိုင် အတွင်းအထည်စလေးများကို လိုက်ကောက်ကာ အဝတ်ခြင်းထဲ စုထည့်နေစဉ် ဖျာကို လှန်လိုက်သော အခါ ဓါတ်ပုံအဖြူအမဲ အရောင်နှင့် ဆယ်ပုံခန့် ထွက်လာသည်…။
“ ဘယ်သူ့ ပုံတွေပါလိမ့်….”
ဟု ပါးစပ်မှ ရေရွတ်ရင်းဖြင့် ကြမ်းပြင်တွင် ထိုင်ကာ ဓါတ်ပုံများကို ကောက်ကြည့်လိုက်သည်..။
“ ဟင်….ဒါ ..စောက်ကန်းမ ခင်အေးဟန် ..ဟာတွေပဲ ဖြစ်မယ်…ကြည့်စမ်း…မိန်းကလေး တန်မဲ့ ဒါတွေ ကြည့်တယ်….”
ဓါတ်ပုံများက မိန်းမနှင့် ယောက်ျား အမျိုးမျိုး လိုးနေကြပုံများ ဖြစ်သည်..။ မိုး…ရင်ထဲ ပူခနဲခံစားလိုက်ရသည်..။ လီးနှင့် ကြာမြင့်စွာ ဝေးနေခဲ့သော စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲမှ ကျင်ခနဲ စိမ့်ခနဲခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်..။
ဓါတ်ပုံထဲမှ ယောက်ျား၏ လီးကြီးမှာ ကောင်မလေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဒစ်မြုပ်အောင် သွင်းထားပုံ ဖြစ်ရာမရိုးမရွ ခံစားရသည်..။ အကြောပြိုင်းပြိုင်း ထနေသော လီးတံကြီးကို ကောင်မလေးက သူ၏လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးများဖြင့် မရဲတရဲ ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အဝကို တေ့သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်..။
လမွေး မဲမဲကြီးများကြားမှ ပြောင်လက်နေသော လီးတန်ကြီးမှာ မိုး နှလုံးသားကို စစ်ခနဲ နာကျင်စေသည်..။လွမ်းချင်စရာ လီးကြီးမျိုး မောင့်ဆီ၌ ပါသွားခဲ့သည်..။ မောင်သည် လေယာဉ် ပိုင်းလော့ ဖြစ်သော်လည်းရိုးအေးသည်..။ လိုးချင်သည်ကိုပင် အိပ်ရအောင် မိုးရယ် ဟု တိုးတိုးလေး ပြောတတ်သော မောင့်ကို မိုးသတိရသွားသည်..။
မောင့်လီးက ဓါတ်ပုံထဲမှ လူလောက်တော့ မကြီး ၊ မိုးအပျိုဘဝ၌ မောင်သည် လက်ဖျားနှင့် မျှ မတို့ခဲ့ချေ..။နို့ကိုင်ခြင်း နှုတ်ခမ်းစုတ်ခြင်းများကိုလည်း မပြုခဲ့..။ ပခုံးကို ဖက်သောအခါများမှာပင် မောင့်လက်တို့တုံခါနေတတ်သည်..။ မောင်နှင့် မိုး ပထမဆုံး လိုးဖြစ်သော ညမှာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၂ ညမြောက်မှသာလိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည်..။
ပထမဆုံးညက မိုးကို ဖက်သော မောင့်လက်များ မိုးက ဆွဲဆိတ်ပစ်သည်..။ ကိုက်သည်..။ မောင်ဆက်မကြိုးစားပဲ စိတ်လျှော့ကာ အိပ်ပျော်သွားရှာသည်..။ မိုးမှာသာ နောက်တစ်ခါ လာနိုးနှင့် အိပ်မပျော်ဖြစ်ခဲ့ရသည်..။ မနက်ပိုင်း ကော်ဖီဝိုင်း၌ မောင့်မေမေက အလိုက်ကန်းဆိုး မသိ….
“ သမီး…ညက အိပ်ရေးပျက်သွားတယ် ထင်တယ်…”
ဟု နှစ်ကိုယ်ကြား နောက်ပြောင်သေးသည်..။
“ တစ်ညလုံး တစ်ရေးမှ မအိပ်ရဘူး…”
မိုးက ပို၍ ရွဲ့စောင်းပြီး မဲ့ရွဲ့ကာ ပြောလိုက်သည်..။
“ အမလေး…အစမို့ပါအေရယ်…နောက်ပိုင်းဆို ကြည့်ပါအုံး..ဟင်း …ရိုးအီပြီး တစ်ပတ်ကို တစ်ခါတောင်မလာတော့ဘူး…. ဟင်းဟင်း…..”
“ ဟာ….မေမေကလဲ….ဘာတွေ ပြောနေမှန်း မသိဘူး….”
ကော်ဖီဝိုင်းမှ အလျင်အမြန် ထလာခဲ့ရသည်..။
“ မြန် မြန် ပဲ…”
ဘုပြောရင်း မောင့်ကို ကွေ့ရှောင်ကာ ထွက်လာခဲ့လေသည်..။ မောင်က မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးကျန်ရစ်သည်..။ စင်စစ် ထိုစဉ်ကတည်းက မိုး အမှားတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကျူးလွန်ခဲ့မိသည်..။ထိုည၌လည်း အလကားနေရင်း မောင့်ကို ဘုပြောနေမိသည်..။ မောင်က နားလည်ခွင့်လွှတ်စွာထိုညကိုလည်း မလိုးရပဲ လက်လွှတ်အဆုံးရှုံး ခံခဲ့ရှာပြန်သည်..။ သုံးရက်မြောက် ညမှာတော့….မောင် မူးလာသည်..။
မိုးကို ခုတင်ပေါ် အတင်းဆွဲလှဲသည်..။ မိုးက ဒူးနှစ်လုံးကို ကွေးပြီး မောင့်ရင်ဘတ်ကိုထောက်ထားသည်..။ မောင်က ထမီ ဆွဲချွတ်သည်..။ မိုးက ထမီကို အတင်းပြန်ဆွဲ၏..။ ကုတင်ပေါ်၌သပ်သပ်ယပ်ယပ် ခင်းထားသော အိပ်ယာခင်းများ ခေါင်းအုံးများ စောင်များ ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျကုန်သည်..။
“ ငါ…မိန်းမ ယူထားတာ လိုးဖို့ကွ….သိလား…”
မောလည်း မော ၊ ရှက်လည်း ရှက်နှင့် ပုဆိုးချွတ်လိုက်သော မောင့်လီးကြီးကို မြင်သောအခါ မျက်လုံးတွေပြာဝေကုန်သည်..။ မောင့်လီးကြီးက မိုး မျက်နှာနား ရောက်လာသည်..။ မြွေနိုင် ဂမုန်းနှင့် အတို့ခံရသောမြွေပွေးမလေး အလား ပါးပြင်း တထောင်ထောင်နှင့် ငြိမ်သွားမိသည်..။ မောင့်လက်တစ်ဖက်ကစောက်ဖုတ်ကို နှိုက်သည်..။ မိုးသိသည်..။ မရုန်းဖြစ်တော့ စောက်စိလေးကို ကစားသောအခါ၌လည်းငြိမ်နေမိသည်..။
ဗြစ် ခနဲ လီးကြီး ဝင်သံကြားမှ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်မိတော့ စောက်ပတ်ထဲသို့ မောင့်လီးက တဘွတ်ဘွတ် နှင့်အားရပါးရကြီး ဆောင့်လိုးနေလေပြီ..။ မိုးကလည်း ရှက်ရှက်နှင့် ကော့၍ ကော့၍ ပြန်ဆောင့်ပေးမိသည်..။ မောင် ဘာတွေ ပြောမှန်း မမှတ်မိတော့..။ သတိရတာတွေလည်း ရှိသည်..။ သတိမရတာတွေလည်းရှိသည်..။ မိုးသတိရတော့ မိုး အင်္ကျီအဝတ်အစားတွေ ကြမ်းပြင်၌ ပြန့်ကျဲနေပြီဖြစ်သည်..။
တစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်အစား လုံးဝမရှိ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ် နှင့် လိုးကြပြန်သည်..။ မိုးကို ဖင်ကုန်းလေးဘက်ထောက်ပြီး လိုးသောအခါ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးကြီး အိအိစိမ့်စိမ့်ပင် ဝင်နေခြင်းကို ပထမဆုံးသတိထားအရသာခံတတ်သွားခဲ့သည်..။
ထိုနေ့ မနက် မိုးလင်းသောအခါ မောင့်တစ်အိမ်သားလုံးနှင့် မျက်နှာချင်း မဆိုင်မိအောင်ရှောင်နေဖြစ်ခဲ့သည်..။ ထိုအရာအားလုံး မိုး ကျူးလွန်ခဲ့သော အမှားများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်..။နောက်ညတွေ၌ မောင်က စောက်ဖုတ်ကို လာနှိုက်တိုင်း မောင်လိုးတော့မည်ကို သိတတ်လာသည်..။သို့သော် ရှက်နေဆဲ ပင် ဖြစ်သည်..။ ထို အရှက်သည် မိုး ဘဝကို အစွန့်ပယ်ခံ ဘဝသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်..။ မောင့်လီးကို စုပ်ပေးရန် နားဝ၌ ကပ်ပြောသော ညက…
“ မိုးကို ဖာသယ် မှတ်နေသလား….မောင်…..”
ဟု ခပ်ကျယ်ကျယ် ခက်ထန်စွာ အော်ဟစ်ပစ်လိုက်မိရာ မောင် ရှက်သွားသည်..။ အနေအထိုင်လည်းတည်သွားသည်..။ မောင့်ထံမှ ယခင်ကနှယ် တုံရီလှုပ်ခတ်သော ရင်လှိုင်းခတ်သံများ အစားဓမ္မဆရာတစ်ယောက်၏ အေးဆေးသော အမူအယာ လေယူလေသိမ်းများကိုသာ တွေ့ရတော့သည်..။
မိုး မည်မျှပင် လိုက်လျော ဆွဲဆောင်သော်လည်း မောင်သည် ခပ်ယဲ့ယဲ့ ပြုံးရင်း မိုးကို သရော်သလိုပြုံးပြသည်..။
“ မောင်…တစ်နေ့လုံး ရုံးမှာ အိပ်ခဲ့တယ်….မိုး အိပ်နှင့်…..”
ထိုစဉ်ကတည်းက ရုံးမှာ အိပ်ခဲ့တယ် ဆိုသော စကားကို မို အဓိပ္ပါယ် ဖော်တတ်ခဲ့ဖို့ ကောင်းသည်..။ ယခုသြစတေးလျ သို့ ခိုးယူသွားသော ဟို ကပြားမက ပုလွေ ကောင်းကောင်း ပေးခဲ့ပုံ ရသည်..။ အခုတော့ မိုးဘဝ အထီးကျန်ပြီး အီးမှန်နေပြီ လေ…။ အဲဒါ လင်ယူပြီးမှ အရှက်ကောင်းလို့…မှတ်ထား…။
“ မမမိုး….မမမိုး…က ဒီမှာကိုး…ကျနော်က အိမ်ထဲ လိုက်ရှာနေတာ…မမမိုးရဲ့…အေ့..အတာ ဒီနေ့မလာဘူးနော်… မမမိုး လက်ထဲက ဘာပုံတွေလဲ.. အေ့…..အေ့…အော်…ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ ကစ်နေတဲ့ပုံတွေကိုး…ကြည့်မမ…ကြည့်…ကြည့်…. အေ့…ကျနော် နဲနဲ မူးနေတယ်….မမ…..”
ဓါတ်ပုံများကို ကိုင်ထားရင်း စိတ်ကူးယဉ်နေမိသော မမမိုး ပုခုံးနှင့် ခေါင်းကို ခွေ့ရင်း မောင်မောင်ထိုးလဲကျလာသည်..။
“ ဒီပုံထဲက …ကောင်မတွေ သွားစမ်းပါ…မမမိုးလောက် မလှဘူး…မတောင့်ဘူး… ဟောဒီ မမမိုး ဖင်……ဖြန်း…….တစ်ခြမ်းစာတောင် မရှိဘူး….အေ့….”
“ ဟဲ့…..အို…ဒီကောင်လေး…ထစမ်း…ထစမ်း ……ထ……”
မိုး ဖင်ကြီးကို ဖြန်းခနဲ ရိုက်ရင်း မောင်မောင် ထိုးလဲကျသွားပြန်သည်..။
မိုး ပျာပျာသလဲ ဆွဲတင်ရသည်..။ ဆိုင်ခန်း ရှေ့ တံခါးများ အလုံပိတ်ထားသဖြင့် မောင်မောင် နောက်ပေါက်မှဝင်လာသည်ကို မသိလိုက်..။
“ ထစမ်း….မောင်မောင် ရယ်…လူမြင်လို့ မကောင်းဘူး…..”
မိုးက တတွတ်တွတ် ပြောရင်း ဆွဲထူနေသော်လည်း မောင်မောင့် ကိုယ်ကြီးက လေးလံလွန်းပြီး နေရာမှတစ်လက်မမျှပင် မရွေ့..။
“ မမမိုး…..မမမိုးရယ်….ကျနော် သိပ်ချစ်ချင် တယ်…ဗျာ….”
အာလေး လျှာလေး ကြီး ပြောရင်း လက်တစ်ဖက်က မိုး၏ ခါးလေးကို သိမ်းဖက်လိုက်ရာ မိုး အလန့်တကြားနောက်ဆုတ်လိုက်မိသည်..။ ဒုတ်ခနဲ စက်ခုံနှင့် ခါးစောင်း တိုက်မိမှ သတိထားလိုက်မိသည်..။
“ မောင် မောင်….မင်း သိပ်မူးနေပြီ ကွာ…..”
“ ဟုတ်တယ်…မမမိုး….အတာ့ကြောင့် လေ….တာတာဆိုတဲ့ ကောင်မ…တင်းတင်းရင်းရင်း လေးကြောင့်ငမောင် တစ်ကောင် မူးရုံမကဘူး…ရူနေပြီ….မမ…….”
မိုးက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်လာသည်..။ မောင်မောင်က ကြမ်းပြင်မှ အားယူပြီး ထရပ်သည်..။ယိမ်းထိုး နေသည်..။ ဝတ်ထားသော ပုဆိုးက ဆီးခုံသို့ လျှောကျချင်နေသည်..။ တဲတဲလေး…။ မိုး ရင်တွေပန်းတွေ တုံကာ ကြောက်လာနေမိသည်..။
“ အိမ်ပေါ် သွားရအောင်…မောင်မောင်ရယ်… နော်….”
ဆိုင်ခန်းက လမ်းဘေး ကပ်လျက်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ တစ်မျိုး မြင်ကုန်မည်ကို မိုး ကြောက်သည်..။ထို့ကြောင့် မောင်မောင့်ကိုယ်ကြီးကို မနိုင်မနင်းကြီး တွဲကာ ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြင့် အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်..။ နှစ်ထပ် တိုက်ခံအိမ်ကြီး ဧည့်ခန်းဘေး…ဧည့်သည်အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ မောင်မောင့် ကို တွဲခေါ်ခဲ့ရသည်..။
“ မမ…မောင်မောင်လေ…အတာ့ကို သိပ်ချစ်တာ……”
“မမ….မမရယ်…ကျနော် သူ့ကို အရမ်း လိုးချင်တယ်…..”
လိုးချင်တယ်…ဆိုသော စကားသည် မူးနေသဖြင့် လေးနက်စွာ အဓိပ္ပါယ် ပေါ်သွားပြန်ရာ မိုး တစ်ကိုယ်လုံးကြက်သီးများ ထကာ ဖိန်းရှိန်းသွားရသည်..။
မောင်မောင်က လက်တစ်ရမ်းရမ်းနှင့် ခေါ်သည်..။ မိုး က မထူးမိ…။ သူ့ကိုသာ ငေးကြောင်ကြောင်ကြည့်လျက် နီရဲသော မျက်နှာဖြင့် ကြည့်နေမိသည်..။
“ မမ…..လို့…ဆို နေ…….”
“ ဘာလဲ…မောင်မောင်ရယ်…ဘာပြောမလဲ..ပြော…..ခဏအိပ်လိုက်ပါ …ဆို…..”
“ အခု အတာ့ အမေကို ဆေးရုံ တင်ပေးပြီးပြီ….အတာ့ကိုလဲ ဆေးကုဖို့ ဒေါက်တာ ယဉ်ယဉ်ကို
“ ဒေါက်တာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်က မင်း လွှတ်လိုက်တာလား…..”
“ ဟုတ်သမှ သိပ်ဟုတ်….”
“ အဲဒါ….အတာ မသိသေးဘူး…..”
“ မသိမှ ဖြစ်မှာလေ….သိရင် သူလက်ခံမှာ မဟုတ်ဖူး…သူက ကျနော့်ကို သိပ်မုန်းနေတာ…မမရယ်…ဘာဖြစ်လို့မှန်း လဲ…မသိတော့ပါဘူး…ဗျာ…..”
“ ဟဲ့…ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတဲ့ဟာပဲ….ကို…..”
မောင်မောင်က ထင်ရာတွေ စွတ်ပြောနေပြန်သဖြင့် မိုးခမျာ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိအောင်ရှက်စိတ်တွေ မွှန်နေမိရှာသည်..။
“ မှုတ်ဖူးလား..မမမိုးရယ်…မမမိုးလဲ လင်ရဘူးတာပဲဟာ…ဘယ်လောက် ကျဉ်းကျဉ်း ဝင်သွားရင်ကောင်းသွားတာ…အေ့…..မဟုတ်ဘူးလား..ဟင်…..အေ့..နော်…နော်…..လို့………”
မောင်မောင်က သူမ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်လှုပ်ရမ်းလိုက်မှ မို သတိဝင်ကာ မောင်မောင့် ရင်ဘတ်ကိုဆီးတွန်းထားလိုက်ရသည်..။
“ မမမိုး နှုတ်ခမ်းလေးတွေက စုပ်ချင်စရာ…သိပ်လှ…….”
မိုး၏ နီရဲသော နှုတ်ခမ်းလေးကို မောင်မောင်က ရုတ်တရက် ဖိစုပ်လိုက်လေရာ မိုး၏ ရှည်လျားသောမျက်တောင်ကြီးများ စင်းကျသွားရှာသည်..။ လက်အစုံကလည်း မောင်မောင့် ကျောပြင်ကို ယောင်ပြီးဖက်လိုက်မိသည်..။ မောင်မောင့် လက်များက ပေါက်စီကြီးများနှယ် နွေးအိနေသော မိုး၏ နို့ကြီးများကိုအင်္ကျီအောက်မှ လက်လျှိုနှိုက်ပြီး ဆုတ်ညှစ်သည်..။
မိုးတစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်များ ဖိန့်ဖိန့်တုန် သွားကာ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာလေးထဲသို့ လက်တွေ့ရောက်ရှိသွားတော့သည်..။ ပုဆိုးအောက်မှ ငေါထွက်လာသော မောင်မောင့် လီးကြီးက မိုး၏ စောက်ဖုတ်ဧရာမကြီး အောက်သို့ လျှိုဝင် ဖိထောက်လာသည်..။ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်ရင်း နို့ကို ညှစ်နယ်ပေးနေသည်..။ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လီးနှင့် ထိုးပေးသည်..။ ဘက်စုံ ဒေါင့်စုံမှ ဝိုင်းရံ ပိတ်ဆို့လျက် တိုက်စစ် ဆင်လိုက်သောအခါ မမမိုး၏ အိန္ဒြေ ခံတပ်ကြီး ဝုန်းခနဲ လဲပြိုကျ ပျက်စီးသွားရလေတော့သည်..။
“ ကုတင်ပေါ်မှာ လိုးရအောင် …မမရယ်….”
မသိပါ…။ မောင်မောင် ဆွဲခေါ်လာပြီး ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန်ပြီး ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်မှ လုံးလုံး သတိရလာသည်..။
“ ထမီ မချွတ် နဲ့….”
“ မချွတ်ပဲ ဘယ်လို လိုးမလဲ …မမရဲ့…”
“ အောက်စက လှန်ပြီး လုပ်ပေါ့လို့…”
“ မမ ရဲ့ အလှကို တဝကြီး ဘယ်ခံစားရမှာလဲ…”
“ နေ့ခင်းကြီး မောင်မောင်ရဲ့….တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာရင် ဒုက္ခ….ကဲပါ…မြန်မြန် လုပ်…”
အသံတွေ တုံနေမှန်း မိုး ဖာသာ သိသည်..။ မောင်မောင့် အလိုးကို ခံချင်စိတ်ကလဲ ပြင်းပြ လာသည်..။ဒီအခြေအနေ ရောက်မှတော့ မထူး…တော့ပါဘူး…။ မောင်မောင်က ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ မဲနက်မှောင်မှိုင်းနေသော လမွှေးများကြားမှ လီးကြီးက ထောင်ထွက်လာသည်..။ ကာလကြာမြင့်စွာမျက်ကွယ်ပြုနေခဲ့ရသော လီးကြီးကို မိုး မရဲတရဲလေး စွေစောင်းကြည့်ရင်း နှလုံးသွေးတွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေလေသည်.။
မောင်မောင်က မိုးလက်ကလေးကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်..။ ပြီးလျင် ပြီးရောသဘောထားကာ သုံးလေးချက် ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ပြီး စောက်ပတ်ထဲသို့ ဆွဲသွင်းပေးလိုက်လေသည်..။
“ အိုး…..မောင် မောင်….ရယ်……..”
ကော့ထောင်တက်သွားသော ဆီးခုံနှင့် ဆောင့်ချလိုက်သော ဆီးခုံချင်း ရိုက်မိသံက ဖောက်ခနဲ ပင်မြည်ဟီးသွားသည်..။ ဖောင်းအိနေသော မိုး၏ ဆီးခုံကြီးက ကြီးမားကျယ်ပြန့် သောသောင်ပြင်ကြီးအလား…၊ ဖွေးလွှလွှကြီး…။ မကြာခဏ စောက်မွှေးများ ရိတ်ရိပ် ပေးမှုကြောင့်လည်း မိုး၏စောက်မွှေးများက ပေါက်ခါစ အငုတ်လေးများက စူးစူးရှရှလေး…။
တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ဆောင့်လိုက်သောအခါ လက်လေးနှင့် တင်းတင်းကြီး ဖက်ကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍လိုးလိုက်သော မောင်မောင့် လိုးသံကြီးများက တပြိုင်တည်း ပေါ်လာသည်..။
“ မမ…စောက်ပတ်ကြီးက အိနေတာပဲ မမရယ်…”
မိုး ၏ နားဝလေး၌ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောလိုက်သော မောင်မောင်၏ ကျောပြင်ကို လက်သီးဆုတ်လေးဖြင့်ဘုတ်ခနဲ ထုပစ်လိုက်သည်.။
“ ဘာတွေ လျှောက် လျှောက်ပြောနေမှန်း ..မသိဘူး….သွား….အွန်း…အွန်း….အိုး……”
နှုတ်ခမ်းလေး စူကာ ခပ်မူမူ ပြောလိုက်သော မမမိုး၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို မောင်မောင်ကပူးကပ်ဖိစုပ်ပစ်လိုက်ပြန်သည်..။ တဆက်တည်း ဖင်ကြီးကို ဒလစပ် ဆက်ခါ ဆက်ခါဆောင့်လိုးပစ်လိုက်ရာ…ပထမအချီ နှစ်ယောက်လုံး ထွက်ကုန်ကြလေတော့သည်..။ စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့်လီးမှာ စိုရွှဲကုန်လေသည်..။
“ ပျို…ပျိုပါအုံး….နင့်ဟာက ဝင်ရုံ ရှိသေးတယ်…ထွက်ပြီ..အရက်သောက်ထားရင် ကြာအောင်လိုးလို့ရတယ်…ဆို…..”
“ ကျနော်က အရက်မှ မမူးတာ…”
“ တကယ် မမူးဘူး…မမရဲ့…မမရဲ့ ဟောဒီ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးချင်လွန်းလို့ တမင် အကွက်ဆင်ပြီးလာခဲ့ရတာ….ကဲ….နောက်တစ်ချီ လိုးကြဦးစို့…မမရယ်…မဝသေးဘူး…”
“ သွား……..တော်တော့…သူ အရမ်းဉာဏ်များတာ…ဒီက သူ တကယ် မူးနေတယ် မှတ်လို့ဟာ…….”
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 15,975
← ညီမလေး ခမ်းစုမီ
သုခရိပ်မြုံ အပျိုကြီးဘုံ →